Muscovite makwaara dị ka mica, isinglass, ma ọ bụ potash mica - Video
Zụrụ muscovite eke na ụlọ ahịa anyị
Muscovite makwaara dị ka mica, isinglass, ma ọ bụ potash mica bụ mineral hydrated phyllosilicate mineral na nke potassium. O nwere ihe ndi mmadu na acha an’aluu nke oma nke kachasi nma nke kariae nke na aru ike.
Muscovite nwere mohs siri ike nke 2-2.25 yiri ihu, 4 dọrọ aka na ya na ike ndọda nke 2.76-3. Ọ nwere ike ghara enweghị odo ma ọ bụ zoo site na grays, browns, griin, odo, ma ọ bụ violet ma ọ bụ ọbara ọbara, ma nwee ike doo anya ma ọ bụ translucent. Ọ bụ anisotropic ma nwee nnukwu birefringence. Usoro kristal ya bụ monoclinic. A na-akpọ ụdị ahịhịa ndụ chromium nwere fuchsite; mariposite bụkwa ụdị muscovite bara ụba nke chromium.
Muscovite bụ ihe kachasị dị na mica, nke a na-ahụ na granite, pegmatites, gneisses, na schist, yana dịka kọntaktị metamorphic ma ọ bụ dịka ịnweta nke abụọ sitere na mgbanwe nke topaz, feldspar, kyanite, wdg. Na pegmatites, a na-ahụkarị ya na Ibé akwụkwọ buru ibu ma bara uru na azụmahịa. Ibe ahihia a choro maka imeputa ihe ndi nkpuchi ma chochi ihe dika otutu.
Aha ahụ bụ muscovite sitere na Muscovy-iko, aha a na-akpọ mineral na Elizabethan England n'ihi ojiji ọ na-eme Russia n'oge a dịka nhọrọ dị ọnụ ala karịa na iko na windo. Amalitere iji usoro a eme ihe na England na narị afọ nke iri na isii ka mburu ya pụtara na leta George Turberville, onye ode akwụkwọ nnọchite anya England na tsar Ivan the terror, na 1568.
Muscovite na-achịkwa shuga dị n’ọbara, na-eme ka ihe ndị na-eme ka mmiri gharazierelata ya, na-ebelata akpịrị ịkpọ nkụ ma na-egbochi agụụ mgbe ha na-ebu ọnụ. Ọ na-edozi akụrụ. Ọ na - egbochi ehighị ụra na allergies ma na-agwọ ọnọdụ ọ bụla sitere na ngbanwe ma ọ bụ nsogbu.
Nkume ahụ na-akwado ịhụnanya na-enweghị atụ, imeghe obi ịkekọrịta ma nyere gị aka ịnabata ezughị okè nke ndị ọzọ. Eleghi anya, ọ bụ ezigbo okwute ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na dyspraxia ma nwee nsogbu clumsiness na ọgba aghara aka ekpe.